IDiploma - Isazi semisebenzi yoMhlaba - iGeofumadas
IDiploma - Isazi somsebenzi womhlaba
NgoJanuwari, 2021 eziningana
Le khosi ihloselwe abasebenzisi abanentshisekelo emkhakheni wokuzwa okukude, abafuna ukufunda amathuluzi nezindlela ngendlela ebanzi. Ngokunjalo, labo abafisa ukugcwalisa ulwazi lwabo, ngoba bayazi kahle isoftware futhi bafisa ukufunda ukuxhumanisa imininingwane yendawo neminye imijikelezo yokutholwa, ukuhlaziywa nokuhlinzekwa kwemiphumela yezinye iziyalo.
Dala amakhono okuzuza, ukuhlaziywa nokuhlinzekwa kwemininingwane yendawo. Le nkambo ifaka ukufundwa kwe-HEC-RAS, enye yezinhlelo ezisetshenziswa kakhulu emkhakheni wokuhlaziywa kwamanzi; kanye nokusetshenziswa kwamathuluzi idatha ye-CAD / GIS esebenzisana ngayo nakweminye imikhakha efana neGoogle Earth ne-AutoDesk Recap. Ngokwengeziwe, kufaka phakathi imodyuli esebenzayo / yomqondo wokuqonda wonke umjikelezo wokuphathwa kolwazi kusuka kuzinzwa ezikude.
Izifundo zingathathwa ngokuzimela, ukuthola idiploma yesifundo ngasinye kepha «IDiploma Land works Expert»Ikhishwa kuphela lapho umsebenzisi ethathe zonke izifundo ohambweni.
Inkambo yeBlender - Imodeli yedolobha nokwakheka komhlaba
I-Blender 3D Ngalesi sifundo, abafundi bazofunda ukusebenzisa wonke amathuluzi wokumodela izinto ku-3D, ngokusebenzisa ...
Isingeniso ku-Remote Sensing Course
Thola amandla okuzwela okude. Zibonele, uzizwe, uhlaziye futhi ubone konke ongakwenza ngaphandle kokuba khona ....
Isifundo Sokumodela Esingokoqobo - I-AutoDesk Recap ne-Perspect3D
Dala amamodeli edijithali avela ezithombeni, nge-software yamahhala futhi nge-Recap Kulesi sifundo uzofunda ukudala e ...
Thumela Previous«Langaphambilini IDiploma - Isazi seGeospatial
Post Next Ama-geomoments - Imizwelo nendawo kuhlelo lokusebenza olulodwaOkulandelayo »
Isifundo se-Civil 3D semisebenzi yomphakathi - Izinga 4
Izincazelo, amadreyini enhlanzeko, iziza, imiphambanandlela. Funda ukudala imiklamo nemisebenzi eyisisekelo yomugqa ngesoftware ye-Autocad Civil3D esetshenziselwe ...
Funda i-ArcGIS Pro Easy - kuyinkambo eyenzelwe abathanda izinhlelo zezindawo, abafuna ...